एनआरएनएको कार्यकाल ६ महिना थप, प्रतिनिधिका गुनासा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन « Janata Times
२०७८, १८ मंसिर शनिबार
३१ आश्विन २०७८, आईतबार ००:००
एनआरएनएको कार्यकाल ६ महिना थप, प्रतिनिधिका गुनासा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन
लण्डन, असोज ३१ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकाल ६ महिना थप गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको शनिवार सम्पन्न बैठकले विधानको धारा १३ को उपधारा २ बमोजिम वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको संघका सचिव गौरीराज जोशीले जानाकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकले संघको १० औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन आगामी ३० नोभेम्ताबरभित्र गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा विवाद हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले संघको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयको पत्रपछि २३ देखि २५ अक्टोवरका लागि तय गरिएको १० औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको थियो । बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुका विषयमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्न संघका पूर्वअध्यक्षहरुसँगको परामर्शमा एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, सल्लाहकारसहित करिव १०० भन्दाबढी सदस्यहरुले आआफ्ना भनाई राखेका थिए । अध्यक्ष पदको लागि वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्षद्धय डा. बद्री केसी, रविना थापा र पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ । संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संघको महाधिवेशनमा पेश हुने वार्षिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन समेत संघको विधान अनुसार १ महिना अगावै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
संघको १० औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको लागि ६४ देशका ३ हजार ५ सय प्रतिनिधिहरु चयन भइसकेका छन् । संघको विधानअनुरुप यसअघि नै राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशनबाट अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यहरु चयन भैसकेका छन् भने आगामी निर्वाचनबाट क्षेत्रीय संयोजक सहित ४८ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने छन् ।
आजबाट चितवनबाटै हुन्छ ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ नवीकरण
चितवन, मंसिर १८ । चितवनमा आजदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण कार्य सुरु हुँदैछ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं
आज सूर्य ग्रहण : नेपालबाट नदेखिने भएकाले सूतक बार्नु नपर्ने
काठमाडौं, १८ मंसिर । सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एट्लान्टिकका देशबाट
एनआरएनए विवादमा तानिइन् प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु
काठमाडौं, मंसिर १८। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवा
त्रिभूवन विमानस्थल बिहानैदेखि बन्द
काठमाडौं, मंसिर १८ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहानै देखि बन्द भएको छ । बाक्लो हुस्सु
मौसममा क्रमश: सुधार हुने, आज यी क्षेत्रमा छ हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं, मंसिर १८ । पछिल्लो तीन दिनदेखिको प्रतिकूल मौसममा क्रमशस्सुधार हुँदै जाने भएको छ ।
यस्तो छ तपाईंको आजको राशिफल : मिथुनको खराव, धनलाई लाभ
आज २०७८ मंसिर १८ । ४ डिसेम्बर २०२१ । मार्गशीर्ष कृष्णपक्षको औँशी । अनुराधा नक्षत्र,
झेली काम खारेज होस : गोकुल बाँस्कोटा
काठमाडौं, मंसिर १७ । एमाले नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झेली काम खारेज होस भन्दै
कमल थापालाई ठूलो झडका, राजेन्द्र लिङ्देन समुहमा खुले प्रभावशाली नेता विक्रम पाण्डे
काठमाडौं, मंसिर १७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे राजेन्द्र लिङ्देन समूहमा खुल्नुभएको